भेडा - जनावर एकदम हार्डी र undemanding छ। को गाई पारित गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ छैन - साथै, तिनीहरूले ravines को ढलान मा अर्ध-मरुभूमि मा, तलहटी मा, खुरचना गर्न सक्षम, मोबाइल र हल्का छन्। भेडाको पालन गरेमा र प्रजनन गाह्रो छैन। यो जाडो मा घास हुनेछ, र गर्मी मा - चराई। यस मामला मा, यो महँगो निर्माण र स्थापना को भारी लागत आवश्यकता छैन।
भेडा प्रजनन, पक्कै, यो लाभप्रद छ। र मासु र ऊन ठूलो मांग गर्दै छन्। tonkorunnoj (पातलो hairs, तल) polutonkorunnyh (ऊन homogeneous, तर यति राम्रो छैन) र भद्दा ऊन (मासु र sheepskin लागि): जनावरहरूको उत्पादकत्व3समूह विभाजित छन्। धेरै प्रजाति को बेहतर भेडा जातिहरु को, सायद romanovskoj dilution grubosherstnyh।
एक पाठो (दुई को अधिकतम) Romanov पाँच जन्म दिन, वा छ, र सात पाठाहरूलाई ल्याउन, अन्य जातिहरु गर्न विपरीत मा: उनि एकदम prolific छन्। यो नस्ल को भेडा पनि किनभने sheepskin उच्च खरीद मूल्यहरु को धेरै लाभदायक छ (अन्य जातिहरु लागत धेरै कम छ)।
भेडाको एक बगाल देखे मानिस, कुनै एक यी पशुहरू नम्र र defenseless जस्तो कि अस्वीकार गर्नु हुनेछ। त्यहाँ सम्पूर्ण बथान एक ब्वाँसो carved छ जब पटक थिए। सायद, सबै पशुधन को आफूलाई भेडा मात्र रोक्नु गर्न सक्दैन। यी पशुहरू स्थिर पर्यवेक्षण आवश्यक प्रजनन। समस्याका कारण धेरै गरीब दृष्टि छ। यो त अत्यधिक भेडा उखानमा बथानलाई विकास छ किन हो: जहाँ त्यहाँ एक छ, त्यहाँ अन्य छन्। को कारण गरिब दृष्टि पनि आफ्नो बाटो घर फेला पार्न नसक्नुको बताउँछन्। त्यसैले, एक बाख्रा, जो पूर्ण भन्दा राम्रो भेडा खुवाउन ल्यान्डमार्क। एक हात मा, यस्तो राम्रो-विकास बथानलाई अन्त अनुमति गर्दैन व्यक्तिहरूलाई खो, र अर्को संग - एकदम यी पशुहरू को हेरविचार complicates।
भेडा 25 वर्ष सम्म बाँचिरहेका छौं। तर पनि निर्माता र proizvoditelnitsy आठ वर्ष को बल मा समावेश गर्यो। अपवाद उल्लेखनीय उत्पादकत्व संग अनुमति छन्। मात्र समस्या भेडा चाँडै मिट दाँत हुन् भनेर छ र तिनीहरूले गाह्रो गम चबाने (तिनीहरूले बलौटे र Stony soils मा खुरचना विशेष गरी यदि) पाउन। यो को प्रजनन कि राय को अर्को प्लस छ भेडा Romanov प्रकार अरूलाई भन्दा पाँच पटक थप सन्तान छोड्न महिला समय: सबै भन्दा लाभदायक। आफ्ना छोराछोरीलाई द्वारा पाँच थप यो संख्या गुणन हुनेछ।
लाभ गणना गर्न सजिलो छ: उमेर छ महिना मा महिला gestation र जन्म (अर्को प्लस - पकने) लागि तयार छ। त्यो एक वर्ष दुई पटक जन्म दिन्छ (दुई देखि सात, र औसत मा - पाँच पाठाहरूलाई)। यसरी, एकल महिला बाट वर्षको लागि तपाईं अर्को 10 व्यक्तिहरूलाई प्राप्त। पाँच वर्ष को लागि, क्रमशः, 50. तर तपाईं प्रजनन लागि महिलाहरुको को सन्तान छोड्दा बाहिर, टाउको को संख्या धेरै पटक पहिले नै यो वर्ष वृद्धि हुनेछ। अन्य प्रजातिका महिलाहरुको दुई भन्दा बढी कुनै छोराछोरीलाई "नेतृत्व", र पछि परिपक्व। फरक स्पष्ट छ। को तथ्याङ्क दिइएको प्रतिशत सर्तहरू यी तथ्याङ्कले, राख्न, सबै भन्दा प्रजाति को प्रजनन 120% छ, र Romanovs - 300%। उत्कृष्ट, सही?
lactation समयमा एक भेड 7% (वा बढी) 6% बोसो र प्रोटिन युक्त, दूध को 200 लिटर यो नस्ल दिन्छ। गाई मा, तुलना लागि, सामग्री दुई पटक कम। राम्रो तरिकाले-विकास थन मूलतः दुई निपल, कहिलेकाहीं थप (जस्तै गर्भाशय, पाठ्यक्रम, अधिक डेयरी)।
90 किलो (ewes - - 60) romanovskoj जातिहरु 40 किलो गर्न उमेर अप र एक शरीरको वजन को छ महिना मा मध्यम fattening मा पनि मेढे। grassland बिरुवाहरु को छ प्रजाति को तिनीहरूलाई 570 (गाई मात्र 50) मिल्दो, त्यसैले भेडा पनि गाई त्यहाँ चराई थिए ती क्षेत्रमा खाद्य पाउन सक्नुहुन्छ। खाना हो: घाँस, chaff, पराल, घास, shrubs, छाल, मश र यति मा।
कोट यी पशुहरू उत्कृष्ट र adaptability गर्मी र चिसो गर्न प्रदर्शनी किनभने, जमिनको अवस्था एक विस्तृत दायरामा भेडाको dilution सक्षम बनाउँछ। तिनीहरूले सजिलै तल बीस बोक्न सक्नुहुन्छ जाडो समयमा (सुक्खा फोहर फाल्न हुनुपर्दछ)। गर्मी को शुरू मा गिर ऊन (पर्णपतन) गर्न प्रतिक्रिया।
घरेलू भेडाको गर्व चाँडै पहिचान विदेश पाउनु भएको छ। आज Romanov नस्ल राम्रो यसको दक्षता र धीरज लागि विश्वव्यापी ज्ञात छ।
कसरी आफ्नो हात संग माछा को लागि एक तालाब बनाउन। एक देखि Z गर्न ponds मा माछा खेती
अभिनेता केभिन ऐलेजैंड्रो: व्यक्तिगत जीवन, Filmography र जीवनी
रूसी सत्य अन्तर्गत जनसंख्याको कानुनी स्थिति। रूसी सत्यको सामान्य विशेषताहरु र रूसी व्यवस्था को इतिहास मा यसको महत्व
Pauline को नाम को मूल। मूल्य र कैरेक्टराइजेशन
रिमाइन्डर्ड - यो खेलहरूमा के मतलब छ? कल को ड्यूटी: रिमास्टर भयो